Qashinka cuntada ayaa sii kordhayay maaddaama tirada dadka adduunku ay korortay magaalooyinkuna aad u weynaadeen. Malaayiin tan oo cunto ah ayaa sanad walba lagu tuuraa qashinka adduunka. Ku dhowaad 30% midhaha adduunka, khudradda, badarka, hilibka iyo cuntooyinka la soo baakadeeyey waa la tuuraa sannad kasta. Qashinka cuntada ayaa dhibaato weyn ku noqotay deegaanka wadan kasta. Qashin badan oo wasakh ah ayaa sababa wasakheynta halista ah, taas oo waxyeeleysa hawada, biyaha, carrada iyo noolaha kaladuwan. Dhinaca kale, qashinka cuntada ayaa u jajabiya si aan caadi ahayn si uu u soo saaro gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo sida methane, kaarboon laba ogsaydhka iyo qiiqa kale ee waxyeelada leh Qashinka cuntada wuxuu soo saaraa wax u dhigma 3.3 bilyan oo tan oo gaasas ah. Qashinka cuntada, dhanka kale, waxaa lagu tuuraa qashin qubka oo qaada dhul balaaran, soona saara gaaska qashinka lagu shubo iyo siigada dul sabeysa. Haddii dheecaanka soo-baxa inta lagu jiro qashin-qubka aan si sax ah wax looga qaban, waxay sababi doontaa wasakheynta labaad, wasakhda ciidda iyo wasakhda biyaha dhulka hoostiisa.
Qashinka iyo qashin-qubka ayaa leh faa'iido darro weyn, iyo isticmaalka dheeraadka ah ee wasakhda cunnada ayaa gacan ka geysan doonta ilaalinta deegaanka iyo kordhinta ka faa'iideysiga kheyraadka la cusboonaysiin karo.
Sida qashinka cuntada loogu soo saaro bacriminta dabiiciga ah.
Miraha, khudaarta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, badarka, rootiga, qaxwada, ukunta ukunta, hilibka iyo joornaalada dhamaantood waa la carfin karaa. Qashinka cuntada waa wakiil gaar ah oo nafaqeynaya kaas oo ah isha ugu weyn ee walxaha dabiiciga. Qashinka cuntada waxaa ku jira waxyaabo kiimiko ah oo kala duwan, sida istaarijka, cellulose, dufanka borotiinka iyo cusbada aan dabiici ahayn, iyo N, P, K, Ca, Mg, Fe, K qaar ka mid ah waxyaabaha raadraaca. Qashinka wasakhda ayaa leh wax baabiin kara oo wanaagsan, kaas oo gaari kara 85%. Waxay leedahay astaamaha ku jira maadada dabiiciga ee sare, qoyaan badan iyo nafaqooyin badan, waxayna leedahay qiime dib u warshadeyn sare. Sababtoo ah qashinka cuntada wuxuu leeyahay astaamaha qoyaanka sare iyo qaab dhismeedka cufnaanta jirka, waxaa muhiim ah in lagu daro qashinka cuntada cusub iyo wakiilka bulking, kaas oo dhuuqaya qoyaan xad dhaaf ah kuna daraya qaab dhismeedka isku darka.
Qashinka cuntada ayaa leh heerar dabiici ah oo heer sare ah, oo leh borotiin ceyriin ah oo lagu qiyaaso 15% - 23%, dufanka 17% - 24%, macdanta 3% - 5%, Ca 54%, sodium chloride 3% - 4%, iwm
Farsamada geedi socodka iyo aaladaha la xiriira ee qashinka cuntada loogu badalayo bacrimin dabiici ah.
Waxaa lawada ogyahay in heerka isticmaalka hooseeya ee kheyraadka qashin-qubka uu sababayo wasakheynta deegaanka. Waqtigan xaadirka ah, qaar ka mid ah waddamada horumaray ayaa sameeyay nidaam caafimaad oo lagu daaweeyo qashinka cuntada. Jarmalka dhexdiisa, tusaale ahaan, qashinka cuntada waxaa badanaa lagu daaweeyaa nafaqeynta iyo halsano, iyadoo soo saarta qiyaastii 5 milyan tan oo bacrimin dabiici ah qashinka cuntada sanad walba. Marka lagudaadiyo qashinka cuntada ee Boqortooyada Midowday, qiyaastii 20 milyan oo tan oo qiiqa CO2 ah ayaa la yareyn karaa sanad walba. Isku-darka ayaa loo isticmaalaa ku dhowaad 95% magaalooyinka Mareykanka. Isku-darka ayaa keeni kara faa'iidooyin kala duwan oo deegaanka ah, oo ay ka mid tahay yareynta wasakheynta biyaha, iyo faa'iidooyinka dhaqaale waa kuwo la tixgelin karo.
Biyaha ayaa ah waxyaabaha aasaasiga u ah qashinka cuntada ee lagu tiriyay 70% -90%, waana aasaaska qashinka cuntada. Sidaa darteed, fuuqbaxu waa qaybta ugu muhiimsan ee geeddi-socodka qashinka cuntada loogu beddelayo bacriminta dabiiciga ah.
Aaladda kahortaga qashinka cuntada waa talaabada ugu horeysa ee daaweynta qashinka cuntada. Inta badan waxaa ku jira Dewatering Systemà Quudinta Nidaamka Nidaamka Kala-soocida otomaatiga ah Nidaamka adag ee dareeraha ah ee saliida-biyaha Separatorà In-markab. Socodka aasaasiga ah waxaa loo qaybin karaa talaabooyinka soo socda:
1. Qashinka cuntada waa in marka hore la qallajiyaa maxaa yeelay waxa ku jira biyo aad u badan.
2. Ka-qaadista qashinka aan dabiici ahayn qashinka cuntada, sida biraha, alwaaxda, caagagga, waraaqaha, dharka, iwm.
3. Qashinka cuntada waa la kala soocayaa waxaana lagu quudiyaa nooc kala-sooc ah kala-sooca adag ee dareeraha ah si loo burburiyo, fuuq baxo oo u sii xumaado.
4. Haraaga cuntada ee la cabiray waa la qalajiyay waana la nadiifiyay heerkulka sare si looga saaro qoyaanka xad dhaafka ah iyo noolaha noole ee cudurada keena. Dareemida iyo qallaylka wasakhda cuntada ee looga baahan yahay gaarista nafaqeynta, iyo qashinka cuntada waxaa si toos ah loogu diri karaa isku-darka isku xidhka weelka iyada oo loo sii marinayo suunka gudbiyaha.
5. Biyaha laga soo saaray qashinka cuntada waa isku dar saliid iyo biyo, oo ay kala soocaan saliida-biyaha kala sooca. Saliida la kala saaray waxaa si qoto dheer looga baaraandegaa si loo helo biodiesel ama saliidda warshadaha.
Dhammaan warshadda qashinka lagu qubo waxay leedahay faa'iidooyinka wax soo saar sarreeya, hawlgal ammaan ah, qiimo jaban iyo wareeg wax soo saar gaaban.
Haanta halsano waa nooc ka mid ah taangiyada si buuxda uxiran iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda kuleylka aerobic-ka ee heerkulka sarreeya, taas oo beddeleysa tikniyoolajiyadda isugeynaya ee isugeynaya. Heerkulka sare ee xirmay iyo habka nafaqeynta degdegga ah ee haanta ayaa soo saarta nafaqeyn tayo sare leh, oo si sax ah oo xasiloon loo xakameyn karo.
Bacriminta markabku waa dahaaran yahay, iyo xakameynta heerkulka ayaa ah qodobka ugu muhiimsan inta lagu jiro iskudarsashada. Burbur deg deg ah ee walxaha si fudud u nabaad gudi kara ee jirka ayaa lagu gaarayaa iyadoo la ilaalinayo xaaladaha heerkulka ugu wanaagsan ee noolaha yar yar. Ku guuleysiga heerkulka sare ee infekshinta noolaha yar-yar iyo abuur cawska waa lagama maarmaan. Khamiirintu waa laad-bilaabis ay ku sameysay nooleyaal dabiici ah oo ku jira qashinka cuntada, waxay jajabiyaan qalabka compost-ka, iyagoo sii deynaya nafaqooyinka, kordhinta heerkulka 60-70 ° C ee loo baahan yahay in lagu dilo jeermiska iyo miraha doogga, lana kulmo xeerarka ka baaraandegista qashinka dabiiciga ah. Bacriminta markabku wuxuu leeyahay waqtiga ugu dhakhsaha badan ee burburka, kaas oo ku qasan kara qashinka cuntada ugu yaraan 4 maalmood. Ka dib 4-7 maalmood oo keliya ka dib, compost-ka waa la siidayaa, kaasoo ah mid aan ur lahayn, fayodhowran, oo hodan ku ah walxaha dabiiciga ah, wuxuuna leeyahay qiime nafaqo oo dheellitiran.
Bacrimintaan udgoon, bacriminta dabiiciga ee dabiiciga ah ee ay soo saarto isku-darka kaliya ma badbaadin karto dhulka buuxinaya si loo ilaaliyo deegaanka, laakiin sidoo kale waxay keeneysaa faa iidooyin dhaqaale.
GBacriminta dabiiciga ah door muhiim ah ka ciyaaraan istaraatiijiyadaha bixinta bacriminta dhinaca adduunka. Furaha hagaajinta dhalidda bacriminta dabiiciga ah ayaa ah in la doorto mashiinka isku dhafka bacriminta dabiiciga ah ee ku habboon. Granulation waa geedi socodka walxaha u sameysma qaybo yaryar, wuxuu xoojiyaa astaamaha tiknoolajiyadeed ee walxaha, ka hortagga cunnada iyo kordhinta astaamaha socodka, wuxuu suurta gal ka dhigayaa adeegsiga qaddar yar, wuxuu fududeeyaa rarka, gaadiidka, iwm. iyada oo loo marayo mashiinkeena granulation fertilizer-ka. Qiyaasta kala-soocidda alaabtu waxay gaari kartaa 100%, waxyaabaha ku jira agabkuna way sareyn karaan 100%.
Beeraha baaxadda weyn, cabbirka walxaha ku habboon isticmaalka suuqa ayaa muhiim ah. Mashiinkayagu wuxuu soo saari karaa bacrimin dabiici ah oo cabirkoodu kala duwan yahay, sida 0.5mm-1.3mm, 1.3mm-3mm, 2mm-5mm.Cawlista bacriminta dabiiciga ah waxay bixisaa qaar ka mid ah dariiqooyinka ugu macquulsan ee lagu qasi karo macdanta si loo abuuro bacrimin nafaqo badan leh, waxay u oggolaaneysaa keydinta badan iyo baakadaha, sidoo kale waxay siisaa fudeydka wax ka qabashada iyo adeegsiga. Bacriminta dabiiciga ah ee geeduhu waa kuwa ku habboon in la isticmaalo, way ka xor yihiin urka aan fiicnayn, abuurka cawska, iyo jirooyinka, iyo halabuurkooda si wanaagsan ayaa loo yaqaan. Marka la barbardhigo digada xoolaha, waxay ka kooban yihiin 4.3 jeer nitrogen ka badan (N), 4 jeer fosfoor (P2O5) iyo in ka badan 8.2 jeer oo ka badan oo kaalshiyam ah (K2O). Bacriminta cufnaanta waxay hagaajineysaa jiritaanka ciidda iyadoo sii kordheysa heerarka humus, tilmaamayaasha waxsoosaarka ciidda badan ayaa la hagaajiyaa: jirka, kiimikada, guryaha carrada microbiological iyo huurka, hawada, nidaamka kuleylka, iyo sidoo kale waxsoosaarka dalagga.
Ry Qalalan oo qabow.
Mashiinka qallajinta & mashiinka qaboojinta waxaa badanaa la wada isticmaalaa inta lagu jiro khadka soo-saarka bacriminta dabiiciga ah. Qiyaasta biyaha ee bacriminta dabiiciga ah waa laga saarayaa, heerkulka granules waa la dhimay, iyadoo la gaarayo ujeeddada ka-dhalashada iyo nadiifinta jirka. Labada tallaabo waxay yareyn karaan luminta nafaqooyinka ku jira granules iyo xoojinta walxaha.
Sieve iyo baakad.
Nidaamka baaritaanka waa in lakala saaro kuwa Bacriminta dhadhanka aan tayada lahayn ee ay dhammaystireen mashiinka baaritaanka durbaanka Rotary. Bacriminta aan caadiga ahayn ee loo yaqaan 'granular granular' ayaa loo diraa si mar kale loo farsameeyo, dhanka kale bacriminta dabiiciga ah ee aqoonta leh ayaa la soo baakadeyn doonaamashiinka baakadaha oo otomaatig ah.
Ka faa'iideyso qashinka cuntada bacriminta dabiiciga ah
U rogida qashinka cuntada bacriminta dabiiciga ah waxay abuuri kartaa faa iidooyin dhaqaale iyo deegaan oo sare u qaadi kara caafimaadka carrada kana caawin kara yareynta nabaad guurka iyo hagaajinta tayada biyaha. Gaaska dabiiciga ee dib loo cusboonaysiin karo iyo shidaalka noolaha ayaa sidoo kale laga soo saari karaa qashinka cuntada dib loo rogay, taas oo gacan ka geysan karta yareynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo qiiqa iyo ku tiirsanaanta shidaalka
Bacriminta dabiiciga ah waa nafaqada ugu fiican ee carrada. Waa isha wanaagsan ee nafaqada dhirta, oo ay ku jiraan nitrogen, fosfooraska, potassium iyo nafaqeeyayaalka yar yar, kuwaas oo lagama maarmaan u ah koritaanka dhirta. Kaliya ma yareyn karto cayayaanka dhirta qaarkood iyo cudurada, laakiin sidoo kale waxay yareyn kartaa baahida loo qabo noocyada kala duwan ee sunta iyo kiimikooyinka.Bacriminta dabiiciga ah oo tayo sare leh waxaa loo isticmaali doonaa dhinacyo badan, oo ay ku jiraan beeraha, beeraha maxalliga ah iyo ubaxyo lagu soo bandhigo goobaha dadweynaha, taas oo sidoo kale u keeni doonta faa'iidooyin dhaqaale oo toos ah kuwa wax soo saara.